साकेला पर्वको रौनग्ता र महत्व « Kalakhabar
प्रकाशित मिति : मंगलवार, १८ बैशाख २०७५ १०:१३
कलाखबर संवाददाता,बैशाख ,१८ – काठमाण्डौ । सोम्बार काठमाण्डौको राजधानी गोकर्णमा भव्य र सभ्य रुपमा साकेला नाँच मनाएको छ । बैशाख शुक्ल पूर्णिमा साकेला नाचँको पावन अवसरमा आदीबासी किराँत समाजले भेटघाट तथा शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । प्रदेश नं ३ कामाठमाण्डौका केन्द्रिय प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण याक्खा राईले प्रमुख अतिको रुपमा रहेर कार्यक्रमको शोभा बढाएका थिए ।
विशिष्ट विशेष अतिथिको रुपमा गोकर्णेस्वर नगर पालीकाको मेयर सन्तोष चालिसे, हुनुहुन्थ्यो । अन्य विशिष्ट अतिथिहरुमा आदीबासी किराँत महासंघको उपाध्यक्ष सूर्य कुलुङ, भाषा विज्ञ वरिष्ठ सल्लाहकार डा. नेत्र मणि दुमी राई,सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणबीर सुनुवार,किराँत राई यायोख्खाको उप महासचिप जनक राई , त्रि.वि. का प्रध्यापक डा. तारा मणि, आदीबासी जनजातिको अधिकार कर्मी लाउरनीप अधिभक्ता शान्ति कुमारी राई,
आदिबासी किराँत संघको सल्लाहकार तथा कुलुङ संघका महा सचिप ईन्द्र कुलुङ, आदी रहेका थिए । अन्य अतिथिहरुमा श्री महेन्द्र ज्योति उच्च मा.वि. का प्रध्यानाध्याप बिरु मान थुलुङ राई, हिमालयन ट्रष्टका सिनियर प्रोगाम कोडिनेटर तथा सुपर भाईजर ईस्वर मान दुमी राई लगायत अन्य थुप्रै लब्ध प्रतिष्ठित व्यतित्वहरु रहेका थिए । कार्यक्रमलाई औपचारिक रुपमा आदीबासी किराँत समाजका सचिप नैना जेरुङ राईले सञ्चालन गरेका थिए ।
प्रमुख अतिथि कृष्ण याक्खा राईले किराँत मुन्धुम र चलनअनुसार कार्यक्रमलाई उदघाटन गरेका थिए । उदघाटन पश्चात ढोल र झयाँम्टालाई पुजा समेत गरिएका थिए । प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरि औपचारिक कार्यक्रलाई समापन गरिए थिए । यो कार्यक्रमको समापन पछि अनौपचारिक रुपमा साकेला नाँचले छुुट्टै रौनग्ता थपेको थियो । आफ्नो भेषभुषा पहिरण अनि विभिन्न बाजा गाजामा सजिएका पूर्वीय नेपालका किराँतीहरु साकेला नाँच देखाउन निकै नै आतुर देखिए ।
हातमा ढोल डयाँङग्रो झयाँम्टाको ताल अनि सई ढोले सई अर्काे ढोले खई को लयमा गोलबद्ध रुपमा नाँच्दा निकै रमाईलो माहोवल देखिए । युवा युवती देखि बुदाबुढी सबैको उपस्थितिले कार्यक्रम स्थल भरिभराउ थियो । विशेष त स्वभावले नै सबै किराँतीहरु प्रकृति प्रेमी तथा पुजक भएको , आदीबासी किराँत समाजका वरिष्ठ सहाल्लकार तथा भाषा विज्ञ डा. नेत्र मणि दुमी राईले बताउनु भयो ।
भुमी सबैको सृष्टि कर्ता भएकोले यसलाई खनजोत तथा गोड्मेल गर्दा नरिसाओस भन्ने क्षेमा याचन स्वरुप हरेक वर्षको बैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन मुख्य पर्वको रुपमा यो साकेला नाँच मनाउदै आएको उहाँले बताउनु भयो । यो पर्व मनाउदै गर्दा झरि प¥यो भने धर्ती माता खुशी भएको भन्ने मान्यता रहेको समेत उहाँको भनाई थियो ।
परापूर्व काल र आदिम युगबाट हाम्रा अग्रजहरुले मनाउदै आको यस किसिमको कला सस्कृतिलाई अबको नायाँ पुस्ताले पनि विर्सन नहुने उहाँले बताउनु भायो । नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा सुन्दर फूलबारी भएता पनि यहाँ विभिन्न भाषाभाषी ,जातजाति धर्म सँस्कृति तथा रितिरिवाजहरु छन् । जस मध्यको साकेला नाँच पनि एक हो ।
आदिम युगबाट पुर्खाहरुले सृजना गरेका साकेला नाँचको छुट्टै महत्व र पहिचान रहेको आदीबासी किराँत समाजका सचिप नैना जेरुङ राईले बताउनु भयो । साथै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म फैलिएर रहेका नेपाली मुलका किराँतीहरु सँगको आत्मिए जम्काभेट तथा शुभकामना आदनप्रदान स्वरुप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।